Sony Interactive Varaidzo Inozivisa Investment muDiscord | Linux Vakapindwa muropa
Kurwisana Icho chimwe chezvirongwa zvinozivikanwa kwazvo munyika yekutamba, nekuti vashandisi vazhinji vari kuchishandisa kubata vamwe vatambi panguva yemitambo, kana kugadzira nharaunda dzekutaura nekutaurirana. Kana iwe uchida kuziva zvimwe zvakawanda nezve iyi software, ini ndinokurudzira iwe verenga chinyorwa izvo isu tinozvitsaurira kwazviri, tichitsanangura maitirwo ayo anogona kuiswa pane yako GNU / Linux distro.
Chokwadi iwe unoziva kuti paive nemukana wekuti Discord yakawanikwa neMicrosoft, asi pakupedzisira izvo hazvaizoitika. Discord Inc., iyo kambani iri seri kwesoftware iyi, yaiita kunge inoda kuenda yega, asi inoda kukwezva vamwe vatengesi. Uye ndipo paunouya mumufananidzo Sony Interactive Entertainment, iyo yakaita vashoma kudyara muchirongwa ichi.
Uku kupatsanurwa kweJapan Sony kwaisa mari, kunyangwe ivo vasina kuratidza huwandu chaihwo. Muchokwadi, inozivikanwa neshoko kubva kuna Sony pachayo, nekuti Discord haina kuita chero bhuku kusvika parizvino kuzivisa chiitiko ichi. Imwe nhanho yekufambira mberi kwekambani, iyo vanoda mari kusvikira yagadzirira kuwana mukana kana kupihwa neruzhinji (OPA).
Kana iwe ukashamisika kana izvi zvinokanganisa kusimudzira kana chirongwa cheDiscord pachacho, chokwadi ndechekuti kwete. Unogona kuzorora zviri nyore kana uri Discord mushandisi pane chero mapuratifomu. Izvi hazvizokanganisa akasiyana mavhezheni eanoshanda masisitimu ayo ikozvino yawanikwa. Pangave pasina shanduko kune rako rezinesi kana mitengo, chero.
Inongova mari yekudyara iyo ichave yakajeka kune mushandisi. Chinhu chega chakarongwa mumugwagwa wevagadziri vayo chinangwa chekuvandudza kwekubatanidzwa kweDiscord mu PlayStation mapuratifomu (Rangarira kuti koni iyi ndeyekambani yeSony) uye, chokwadika, enderera nezvakajairwa kubva kune vatengi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Sony Interactive Varaidzo Inozivisa Investment muDiscord